Kolombia: Zazalahy 12 Taona Maty Noho Ny Vono Nahazo Azy Tany Am-pianarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Mey 2012 1:31 GMT
Ny Talata 24 Aprily 2012, maty i John Alexander Larrahondo, 12 taona, herinandro taorian'ny namonoan'ny telo tamin'ireo mpiara-mianatra aminy azy noho ny niarovany zazavavy 9 taona avy ao amin'ny kilasin'izy ireo, araka ny tatitra. Tany amin'ny Sekoly Los Gómez [es], any amin'ny faritra ambanivohitr'i Itagüí, kaominin'ny Departemantan'i Atioquia manakaiky an'i Medellín no nitrangan'io loza io.
Na dia nanambara aza ny mpitsabo mpahay lalàna[es] fa aretin'ny taolana no nitarika ny fahafatesany, nandà izany fanapahan-kevitra izany ny reniny [es] sy ireo manam-pahaizana vitsy [es] ary nilaza fa ilay fidarohana azy no antony tena niteraka ny fahafatesany.
Nanokatra [es] fanadihadiana ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna, ary nanambara ny Minisiteran'ny Fitsaràna fa “tsy azo ekena” ny fidarohana ary tsy maintsy iadian'ireo manampahefana tomponandraikitra (dia ny Minisitry ny Fanabeazana sy ny Fitsaràna, ny Biraom-panjakana Kolombiana misahana ny Fiahiana ny Fianakaviana, ary ny Biraon'ny Mpampanoa Lalàna). Mandritra izay fotoana izay, nilaza [es] ny loholon'ny Antoko Maitso Gilma Jiménez fa hitondra ilay raharaha any amin'ny Kongresy ny tenany.
Ao amin'ny Twitter, manoratra i @mariaramitas (1, 2) [es]:
Ny olan'ny ankizy amin'izao fotoana izao dia mandray ny herisetra ho hanihany fotsiny ihany izy ireo. Ary tsy dia miraharaha izany ihany koa ireo mpampianatra. Ary raha mitohy ny fidarodarohana tahaka izao, tsy ho ela dia hisy zazalahy roa hitifitra sekoly amin'ny bala tahaka ny nitranga tany Columbine. Mitandrema ianareo ry mpampianatra.
Amin'alahelo, mitoraka bitsika i Juan Gonzalo Benítez (@juanbenitez1973) [es]:
Maneho ny faharatsian'ny eritreriny i María Isabel Ángel (@MaisAngel) [es]:
Mihetsi-po [es] amin'ny fanapahan-kevitr'ilay mpitsabo mpahay lalàna i Lina Rouge (@linarouge):
Namoaka bitsika maro momba io raharaha io (1, 2, 3, 4) ny mpanao gazety Víctor Solano (@solano), [es] ary namelabelatra izany tamin'ny dikan-teny Kolombiana tanatin'ny pejy natokana ho azy [es] ao amin'ny gazety Kolombiana maimaim-poana mivoaka isanandro, Metro [es]:
Manoratra i Carolina Ruiz (@CaroRuizG) [es] milaza fa tsy nahaloa-bava izy, raha nitoraka bitsika kosa i @lncognito [es] fa tokony ho vahana amin'ny alalan'ny fanabeazana izany olana izany fa tsy amin'ny alalan'ny famoretana.
Anatin'ny tontolon'ny bilaogy, manoratra [es] momba ny andraikitr'ireo ray aman-dreny, ireo mpampianatra, ny Fanjakana i colombiaopina, ary mangataka ny famerenana hijery ireo lalàna:
Samy maika daholo ny famerenana ny fandinihana sy ny fampidirana ireo lamina mifandray amin'ireo heloka vitan'ny ankizy sy ny tanora, ny fanenjanana kokoa ireo fepetra fiarovana amin'ny fampivoarana ny fampidirana ny Rafitry ny maha-tomponandraikitra Amin'ny Heloka an'ireo ankizy sy tanora araka ny voalazan'ny Didim-panjakana 4652, 2006.
Jaime Andrés Jaramillo Botero, ao amin'ny Ojo en lupa, manoratra hoe [es]:
Farany, mitsikera [es] ny kaominin'i Itagüí sy ny media noho ny fifantohan'izy ireo amin'ilay zava-nitranga nefa tsy mitatitra ny tontolon'ilay fianarana any ambanivohitra sy ny toerana misy ireo mpampianatra any amin'ny manodidina, i Wilmar Mejía:
1 andro izayFanoherana